Amagugu afihliwe ama-5 eKildare ngeke Uwathole Encwadini Yomhlahlandlela - IntoKildare
Clane, Kildare, ICelbridge, I-Leixlip, Abathandi Bomlando, Kusabelomali, Amagugu Afihliwe, Abathandi Bangaphandle
'Izindlela Ezingahloliwe ziholela Kumcebo Ongatholakalanga'…
Kukhona injabulo ethile yokuthola okuhlangenwe nakho okuzwakala kuyiqiniso ngokwengeziwe noma kungatholakali ngabahambi. Noma ngabe ayigugu elifihliwe njengamahlathi, amanxiwa omlando nezindlu zasendulo ezicashile kuthrekhi eshayiwe, ezinye zezikhathi zokuhamba ezingakhohlwayo nezingafani nalutho zingatholakala uma usushiya ezincwadini zomhlahlandlela. Lapha, ku-Kildare kwembula amagugu ayo aphezulu amahlanu afihliwe esifundeni.
I-Killinthomas Woods - i-damienkellyphotography
Njengoba kune-10km yokuhamba ngezimpawu, lokhu kungenye yezindawo ezimbalwa ezisazotholakala zobuhle bemvelo obuvelele eCo Kildare. Killinthomas Izinkuni inehlathi elixubile le-hardwood conifer elinezimbali nezilwane ezahlukahlukene kakhulu, futhi liyindawo enhle ongayihambela. Ungahamba uhambo olufushane noma olude, izindlela zizohlala zikubuyisela emuva kupaki.
Ngasenyakatho kweVillage of Prosperous eBallynafagh Townland kunamanxiwa amasonto amabili. Elikhulu yisonto langaphambili le-RC laseBallynafagh elakhiwa ngawo-1830 futhi lagcinwa kwaze kwaba ngekhulu lama-20 kodwa lagcina selingasasetshenziswa futhi ekugcineni lafulelwa ngo-1985. indunduma ekhoneni eliseningizimu-mpumalanga yesonto elikhudlwana. Zombili ziqukethe indawo ebiyelwe engonxande etholakala ngokumangazayo njengesiqhingi esisensimini kakolweni.
I-Barner Ourlittlehiker Emangalisayo
Isibaya Esimangalisayo isakhiwo esihlukile, esimise okakhokho ngaphandle nje kwedolobhana laseLexlip. Ukusukela emuva ku-1743, ngezitebhisi zangaphandle ezungeza ubuso bayo, lesi sakhiwo kukholakala ukuthi ekuqaleni sasiyisitolo sokudla okusanhlamvu futhi kujabulisa ukusibona!
UMore Moore Abbey Woods
IMoore Abbey Woods eMonasterevin iyihlathi elihlanganisiwe elinemizila ehamba ngezinyawo esizeni sesigodlo sekhulu lesi-5 elasungulwa iSt Evin esibonwa ngokubuka ngaphakathi ehlathini. IMonasterevein ifaka uchungechunge lwamatshe ayigugu amahle afihliwe njengoba itholakala ngaseBarrow Blueway futhi ibuye ibe ne-distillery ehlaba umxhwele okwamanje ekhiqizwayo nethemba lokuthi izovulwa ngonyaka ozayo.
Thola izinsalela ze- IDonadea Castle nezingadi ezibiyelwe ezibuyiselwe ngokwemvelo. Bheka isonto nombhoshongo owakhiwe ngumndeni wakwa-Aylmer kanye nekhaya okwakuhlalwa kulo kwaze kwafa owokugcina womndeni ngo-1935. I-Aylmer Loop eyi-5km ubude ikulethela imifudlana futhi ikudabule phakathi kwezinkuni zomdabu ezibanzi. Bona impilo yasolwandle ekuzungezile lapho uhamba echibini bese ubona izingwejeje nezinyoni ezihlahleni ezisendleleni yemvelo. Ngemuva kokuhamba kwakho, phumula ngesiphuzo esishisayo nesidlwana esimnandi endaweni yokudlela epaki yehlathi.
ClaneKildareICelbridgeI-LeixlipAbathandi BomlandoKusabelomaliAmagugu AfihliweAbathandi Bangaphandle